Isaya 45 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Koreshi anozodzwa kuti akunde Bhabhironi (1-8)
Ivhu harifaniri kupikisana neMuumbi (9-13)
Mamwe marudzi anoremekedza Israeri (14-17)
Zvakasikwa naMwari uye zvaanozivisa zvinoratidza kuti akavimbika (18-25)
Nyika yakasikwa kuti igarwe (18)
45 Zvanzi naJehovha kumuzodziwa wake, kuna Koreshi,+Wandakabata ruoko rwerudyi,+Kuti ndikunde marudzi pamberi pake,+Kuti ndiite kuti madzimambo asare asina zvombo,*Kuti ndimuvhurire masuo ane madhoo maviri,Kuitira kuti magedhi arege kuvharwa: 2 “Ini ndichakutungamirira,+Uye ndichaita kuti zvikomo zviti sandara. Ndichatyora-tyora masuo emhangura,Uye ndichagura mazariro* esimbi.+ 3 Ndichakupa pfuma iri murimaNepfuma yakavanzwa iri munzvimbo dzakavandika,+Kuti uzive kuti ndini Jehovha,Mwari waIsraeri, uyo ari kukushevedza nezita rako.+ 4 Ndiri kukushevedza nezita rakoNekuda kwemushumiri wangu Jakobho uye nekuda kwaIsraeri wandakasarudza. Ndiri kukutumidza zita rinokudzwa, kunyange zvazvo wakanga usingandizivi. 5 Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe. Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu.+ Ndichakusimbisa,* kunyange zvazvo wakanga usingandizivi, 6 Kuti vanhu vaziveKubva kumabvazuva kusvika kumaviriraKuti hakuna mumwe kunze kwangu.+ Ndini Jehovha, uye hakuna mumwe.+ 7 Ndinogadzira chiedza+ uye ndinosika rima,+Ndinoita kuti pave nerugare+ uye ndinounza dambudziko;+Ini, Jehovha, ndiri kuita zvinhu zvese izvi. 8 Iwe denga, nayisa mvura kubva kumusoro;+Ita kuti makore anayise kururama. Nyika ngaivhurike, ibereke ruponeso,Uye ngaimeresewo kururama panguva imwe chete.+ Ini, Jehovha, ndakazvisika.” 9 Ane nhamo uya anorwa* neMuiti wake,*Nekuti anongova chaenga*Pakati pezvimwe zvaenga zvemudziyo wevhu zviri pasi! Ivhu ringati here kuMuumbi* waro: “Uri kuumbei?”+ Kana kuti basa rako ringati here: “Haana maoko”?* 10 Ane nhamo anoti kuna baba: “Munoberekei?” Uye kumukadzi: “Muri kusunungukei?”* 11 Zvanzi naJehovha, Mutsvene waIsraeri,+ iye akamuumba: “Ungandibvunza pamusoro pezvinhu zvichauya hereWondipa mirayiro pamusoro pevanakomana vangu+ uye pamusoro pemabasa andakaita nemaoko angu here? 12 Ndakasika nyika+ uye ndakasika munhu pairi.+ Ndakatatamura denga nemaoko angu,+Uye ndinopa uto raro rese mirayiro.”+ 13 “Pane murume wandakaita kuti avepo mukururama,+Uye ndichaita kuti nzira dzake dzese dziti twasu. Ndiye achavaka guta rangu+Osunungura vanhu vangu vakatapwa,+ pasina mubhadharo kana chiokomuhomwe,”+ anodaro Jehovha wemauto. 14 Zvanzi naJehovha: “Mubereko weIjipiti* nezvinotengeswa nevaItiopiya* nevaSebhiya, ivo vanhu varefu,Zvichauya kwauri zvova zvako. Vachafamba vari shure kwako vakasungwa necheni. Vachauya vokotama pamberi pako.+ Vachataura kwauri vachikuremekedza chaizvo vachiti, ‘Chokwadi Mwari anewe,+Uye hakuna mumwe; hakuna mumwe Mwari.’” 15 Chokwadi imi muri Mwari anozvivanza,Haiwa Mwari waIsraeri, Muponesi.+ 16 Vese vachanyadziswa uye vachadzikisirwa pasi;Vagadziri vezvidhori vese vachaenda vachinyara.+ 17 Asi Israeri achaponeswa naJehovha neruponeso rusingaperi.+ Imi hamuzonyadziswi kana kuzvidzwa nariini nariini.+ 18 Nekuti zvanzi naJehovha,Musiki wedenga,+ Mwari wechokwadi,Muumbi wenyika, Muiti wayo, iye akaisimbisa kwazvo,+Asina kungoisikira pasina,* asi akaiumba kuti igarwe:+ “Ndini Jehovha, hakuna mumwe. 19 Handina kutaura ndiri munzvimbo yakavandika,+ munyika yerima;Handina kutaura nevana* vaJakobho kuti,‘Nditsvagei pasina.’* Ndini Jehovha, anotaura zvakarurama, uye anozivisa zvakarurama.+ 20 Unganai muuye. Uyai pamwe chete, imi makapukunyuka kubva kumarudzi.+ Vaya vanofamba vakatakura mifananidzo yakavezwa havana chavanozivaUye vanonyengetera kuna mwari asingagoni kuvaponesa.+ 21 Taurai mashoko enyu nenyaya yenyu. Ngavarangane vakabatana. Ndiani akagara ataura izvi kare kareUye akazvizivisa kubvira kare? Handisi ini here, Jehovha? Hakuna mumwe Mwari kunze kwangu;Mwari akarurama uye Muponesi,+ hakuna mumwe kunze kwangu.+ 22 Tendeukirai kwandiri muponeswe,+ imi mese migumo yenyika,Nekuti ndini Mwari, hakuna mumwe.+ 23 Ndapika neni pachangu;Shoko racho rabuda mumuromo mangu mukururama,Uye harizodzoki:+ Mabvi ese achandipfugamira,Rurimi rwese ruchapika kuti rucharamba rwakavimbika+ 24 Ruchiti, ‘Chokwadi muna Jehovha ndimo mune kururama kwechokwadi nesimba. Vaya vese vakamutsamwira vachauya pamberi pake vachinyara. 25 Vana* vese vaIsraeri vachava vakarurama vachibatsirwa naJehovha,+Uye vachazvirumbidza maari.’”
^ ChiHeb., “Kuti ndisunungure hudyu dzemadzimambo.”
^ ChiHeb., “Ndichanyatsokusunga.”
^ Kana kuti “anoitisana nharo.”
^ Kana kuti “neakamuumba.”
^ Ichi chimedu chemudziyo wevhu unenge waputsika.
^ Kana kuti “kune akarigadzira.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Kana kuti ivhu ringati here: ‘Chawaumba hachina mibato’?”
^ Kana kuti “Muri kurwadziwa nekusunungukei?”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Vashandi veIjipiti.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nevatengesi veItiopiya.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “kuti igare isina chinhu.”
^ Kana kuti “asi hamuzobudiriri.”